सम्झनाको स्पर्शहरु- सिलोङ, लाहुरे सपनाको रँग | Wakhet Diary
सम्झनाको स्पर्शहरु- सिलोङ, लाहुरे सपनाको रँग
Posted on June 24, 2013 by Wakhet Diary	जमानाको कुरा
सके सम्म लाहुरे नै हुनु पर्छ भन्ने थियो परिवार भित्र र आफैलाई पनि। मचा मच रोपाई चल्दै थियो। छिटो पानी परेको ले 2053 साल असार ८-९ मा हाम्रो चुच्चे ढुँगाको खेतको रोपाई थियो।सिलोङ जानु भन्दा ३ दिन मात्रै पहिले थाहा पाएका साथी ईन्द्र र म निकै उत्साहित थियौ भने बाँकी साथीहरु निरास थिए। ९ गतेको रोपाईको बेलुका भोलि ईन्द्र र म सिलोङ को बाटो लाग्दैछौ भन्ने खबर साथीहरुलाई सुनाउदा रिसाउनु सम्म को रिसाए। बेलुका थाकेका साथीहरु यो खबर ले झनै थाके। एउटै दफ्फाको २ जना हलीहरु निस्कदा उनिहरुलाई निक्कै गाह्रो हुने पक्का थियो। हामीलाई जानु नै थियो गयौ। कतिपयले सरापे यस्तो बर्षा को बेला मा भरकात्नेहरु कहिल्यै भर्ति नहोस। हामी चाही देउतीसारा को खिर्राको रुख मा १-१ जोडी ध्वाँजा बाँधेर साईत गर्यौ। बेनी मा भेट्ने सल्लाह अनुसार हिड्दै थियौ हामी सल्लेरी मै पुसाउ सँग भेट्यौ र बाग्लुङ तिर लाग्यौ त्यति बेला बाग्लुङ सम्म मात्रै गाडी आईपुगेको थियो। बेनी आउने बाटो भर्खरै खन्न थालिएको थियो गाडी चल्दैनथे।
बाग्लुङ बस पार्क बाट – सुनौली
काँकड भिट्टाको छोटो बाटो हुदा हुदै पनि पुसाउको ट्रेन पास टिकट गोरखपुर तिर बाट भएको ले हामी बाग्लुङ—स्याङजा वालिङ-बुटवल-भेरहवा-सुनौलीको बाटो तय गर्यौ। पहिल्यै पनि आफ्नो बान्ता गरेको अनुभव थियो। लुम्ले न नाघ्दै हामीले पालै पालो बाटो भरि वाक्ने प्रतियोगीता गर्यौ। सुनौली पुग्दा जमिन घुमिरहेको थियो भने आँखा सुन्निएको थियो। पत्यार लाग्दो कोलाहल र गर्मी को बिच मा सुनौली- गोरखपुर लोकल बस ले नमिठो अनुभव दिलायो। चानचुन पैसालाई आईसी बनाए पछि लाग्यौ पुसाउको पछि पछि लोकलबस मा- गोलघर तिर।
24 घण्टा लेट भयो ट्रेन, गोलघर को बसाई
गोरखपुर ट्रेन स्टेशन मा २४ घण्टा कुर्नु पर्ने भयो। जिवन मै नदेखेको भिड पनि त्यहि देखियो। आफ्नो बेडिङ फैलाएर सुतिरहेका लाहुरेहरु लाई देखेर लेट हुने र पर्खेने हामी मात्रै होईनौ भन्ने मा आत्मसन्तोष लाग्यो। उमेर ले भर्खेरै १६-१७ लागेका हामी लाहुरे बन्न तम्सिए पनि केटाकेटी नै जस्तै थियौ। कतै नदुल्नु हराईन्छ भन्दा पनि नमानी गोलघर को वल्लो छेउ बाट पल्लो छेउ फनफनी दुल्यौ। माग्ने देखी बेच्नेहरु को कला निक्कै आश्चार्य लाग्ने खाले थिए। कसैले हातमा एक दर्जन पुस्तक बोकेर तोता मैना कि कहानी मुखाआखर गितिलय मा पढिरहेका थिए। सुरुमा गीत गाएको कि पुस्तक बेच्न बसेको अलमल पर्यौ। बच्चाले बच्चा समाएर पेसा नदिउन्जेल ढोग्ने केटाकेटी देख्दा मन नै नरमाईलो भएर आयो। दिउ भने कतिलाई दिने नदिउ ढोगेर मागी रहेने थुप्रे १-१ को नोट सके पछि पुसाउले देख्नु भयो एकै ठाउँ मा नबस ठाउँ फेरि फेरि बस माग्ने आयो भने उठेर अर्को तिर जाउ भनेर सिकाउनु भयो। पिसाप फेरेको १ रुपैया, नुहाएको २ रुपैया जीवन मा पहिलो पटक पेसा तिरेर ट्वाईलेट गयौ र नुहायौ। घुम्दै गर्दा एक ठाउँ मा तौल नाप्ने मेशिन देख्यौ। पालै पालो जोखिएको ईन्द्र 65 किलो थियो। म 55 किलो थिए। तौल जोख्ने मेसिनले सानो पोस्टकार्ड मा आफ्नौ तौल प्रिन्ट गरेर दिने गर्दथ्यौ। “आपका वजन 55 केजी” धन्यबाद एकातिर भने अर्को तिर होरो हिरोईन को फोटो थियो। लाहुरे हुन गएका ठिटाहरुले केटाकेटीले जस्तै जोख्दै हिरो हिरोईन को कार्ड बटुल्दै गर्यौ। काजल, रानी मुखर्जि, रबिना, माधुरी, सुनिल सेट्टी, मिथुन हिरो हिरोईन को फोटो तौल नापेरै सँगाल्यौ। पुसाउले थाहा पाएर के गरेको केटाकेटीले जस्तो भनेर गाली गर्नु भयो। हामीलाई रमाईलो लाग्यो १ रुपैया को नोट छिराउदै हिरो हिरोईन को फोटो निकाल्दै गर्यौ। तौल त पहिलो पटक मै थाहा भे सकेको थियो। समोसा- अमलेट थुप्रै पटक खायौ। चिया बेच्नेहरु घुमी घुमि आउथे। अमलेट, चिया, बदाम, चटपटे जस्तै धुमी धुमी बेच्दथे। पुसाउले आफ्नो बेडिङ बाट ब्लाङकेट निकाल्नु भयो र ट्रेन स्टेशनमा अरुले जस्तै हामीले पनि भुईमा बिछ्चाएर सुत्यौ। रुमालले मुख छोपेर सुतेको बिउझदा खेरी रुमाल हावाले लग्यो या मान्छेले दुबै जनाको थिएन। पैसा चाही बाबा को सल्लाह अनुसारको पैन्ट लगाएर जोगाएका थियौ तर फर्कदा त्यो तरिका काम लागेन ४ जना कै पकेट साफ भयो।
सुरु भयो पहिलो ट्रेन यात्रा गोरखपुर- गुहाती
बाटो मा पानी परि रह्यो। सबै लाहुरे लाहुरे हरु मात्रै थिए केहि सँग हामी जस्तै भाई, भतिजा, साला पनि थिए भर्ति हुन सिलोङ सँगै जान लागेका । बाटो भरि पानी परि रह्यो। खेतहरुमा सनपात ( जुट) उखेलेर पानीमा दुबाई रहेका किसान हरु देखिन्थे। खाना बेच्नेहरु टिनमा जडिट कोईला चुला ले चिया पकाई रहेका हुन्थे। चिया माटो को कप मा दिन्थे। सुरु सुरु मा कप लिनु बिर्सिए होला भनेको होईन रहेछ। ति माटाका कपहरु नै चिया सहित आएका रहेछन। ट्रेन को टाउको र पुछ्छर देख्न सम्भव थिएन जति बेला हेर्न खोज्दा पनि आँखा दिब्बाहरु को बिच सम्म मात्रै पुग्थे। ब्रम्ह्मपुत्र नदि को फैलावट बारी पारी किनारा र आफै बसेको ट्रेन को छेउ-टुप्पा मैले चाहेर पनि हेर्न सकिन। यति लामो थियो ट्रेन र फराकिलो ब्रमाहपुत्रनदि। १९९६ मा ३ रुपैया मा १ दर्जन केरा (मसिना) सस्तो लाग्यो भने १ रुपैया को चिया मा कति कप को होला कति चियाको हिसाव गर्न मन लाग्यो। ट्रेन को लिग तलका बस्तीहरुका(मुजहफपुर) मानिसहरु लाजै नमानि बाटोमा पानी को बोटल राखेर ट्रेनतिर नै हेर्दै दिशा गरिरहेका देखिन्थे। कतिले चिया पिएर सकेको माटो को कप ले हान्थे तर ट्रेन को स्पिड ले उनिहरु को निसाना सोझो पर्दनथ्यो। ब्रम्हापुत्र को पुल तर्दै गर्दा यति लामो ताले पुल पनि हुदो रहेछ भनेर छक्क लागेको थियो। तल ट्रन गुडिरहेका थिए भने माथी बस,ट्रकहरु गुडिरहेका थिए। ट्रेनमा चाहि बान्ता भएन त्यसैले वरिपरिका नजराहरु हेरियो। कतै फाँत भरि सेतो गाई चरिरहेका थिए कतै मानिसले पानी को माथी केरा को बोट, सनपातको सन्थी हरु थुपारेर माटो बोक्दै अग्लो बनाएर घर बनाउन लागि रहेका देखिन्थे। सनपात उखेले पछि त्यहाँ धान रोपिने रहेछ। सनपात उखेलेर पानी मै छोडिने रहेछ र बोक्रा पानी मा गलेपछि त्यो जुट को कच्चा पदार्थ सनपात तैयार हुने रहेछ। कुहिएका पातहरु धानको लागी मल र सन्थी ( डाँठ) अस्थाई घर बनाउनको लागी बारको काम गर्ने रहेछन।
गुहाती मा चेकिङ भयो
यति बेला सम्म बिना चेक त्यहाँ सम्म पुगेका हामी लाई पुरै शरिर नै चेक भयो लाहुरेहरु को सबै डकुमेन्टहरु छाम छुम पारे पछि पुलिसले सोध्यो“सिगरेट है ?पकेट नै सुघे र एउटा खिल्ली झिकेर स्टाईलले सुध्यो लाईटर माग्यो सल्काएर चलो भन्दै गयो। हामी ओवर हेड ब्रिज बाट तल झरेर खाना खायौ र फेरि लाग्यौ सिलोङ को गाडीको चढ्यौ। त्यति बेला सम्म हामीले निक्कै धेरै लाहुरे र हामी जस्तै लाई भेट्यौ धेरै भएको ले बस कता लाग्छ खोज्नु परेन बस हामी भए तिर बाटै बस लिएर आयो ड्राईभर अनि लागियो सिलोङ तिर। गर्मिले लखतारान पारेको ज्यान मा चिसो चिसो हावा ठोकिन्दै थियो। अनुमान लाग्यो बाहिर सितल छ। आँखा दुलाएको बनभरि बनकेरा का घारीहरु देखिन्थे भने पहराका पहरा फुटाएर ढुँगाखानीहरु मा काम चलिरहेका बाटो बाटै देखिन्थे। आछाम ले नेपालीहरुलाई कडाई गरेको छ प्रबेशमा भनेको पनि सुनिन्थे। यस्तो भन्नु पर्छ उस्तो भन्नु पर्छ भनेर हामीलाई पालै पालो सिकाई रहेका थिए। साला, भतिजा, भदैहरु हौ भन्ने होईन दाई हो, बाबा या अंकल हो भन्नु पर्छ भनेर सिकाईएका थिए। बाबा पेन्शनर हो भने नम्वर भन्नु भनिन्थे। आफु को सँग गएको हो उस्को नम्मर कन्ठ गर्नु या कतै तिपेर राख्नु भनेर सिकाईएको थियो। मलाई चाहि सिलाङ पुग्ने बेला सम्म पनि आफै लाई लग्ने पुसाउ कै नाम थाहा थिएन। कसो कसो बेडिङ को लेवल मा हेरेर नाम र नं चाही थाहा पाए। घर मा झी को पुसाउ भनेरै चिनियो अव नाम सोध्ने जरुरी नै परेन। पुलिस बजार बाट टैक्सी मा 5/8 GTC पुगियो। पानी परि रहेको थियो डिपोट कम्पनी को अगाडी को सेन्ट्रिले बर्साती ओडेर चेक गर्यो र गेट खोलिदियो। डिपोट कम्पनी मा पेन्शन निस्कने नम्मरीहरु 450 भन्दा बढि थिए। नजिक नजिक का साथीहरुले आफ्नो नजिक को खाली बेड तिर लगेर र सुताए। लँगर बाट बचेको खाना हरु मिस्टिन मा ल्याईदिए खायौ । थाकेका थियौ कुरै नगरी निदायौ।
5/8, GTC (Depot Co. ) सिलोङको बसाई
डिपोट कम्पनी पेन्शन निस्कने बेलाका लाहुरेहरुले फाईनल सेटेलमेन्ट लिनेहरुको लागी हो। चार्ली, अल्फा, बिटा, डेल्टा, यस्तै कम्पनीका नामहरु थिए। 5/8 गोर्खा टेर्निङ सेन्टर हो ।यहाँ बाट गोर्खा भर्ति गरि रिक्त पदपुर्ति गरिन्छ। त्यहाँ हामी जस्तै सयौ ठिटाहरु थिए सबै आफन्तका पछि लागेर लाहुरे सपना लाई जलप लगाउन पर्खिरहेका थिए। सिलोङ पुगेको भोलिपल्टै ईन्द्र पाईजा लाई उस्को भेनाले लिएर जानु भयो;। कुँहु निवासी भेना फेमली सहित क्वाटरमा बस्नु हुन्थ्यो। हामी नेपालका म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्बत, कास्की, तनहु,पाल्पा, नवलपरासी, स्याङजा तिर का ठिटाहरुको समुहमा थियौ। कम्तीमा पनि 45 जना जति महिना को ४५० भारु तिरेर मेसमा खाना खान पाउने गरी बस्यौ।आर्मी कै लँगरमा खान्थ्यौ र डिपोड को माथी पिग्री ( बङगुर फार्म) को नजिक कै को पुरानो गोदाम मा सुत्दथ्यौ। लाहुरेहरु को आफ्ने अलगै बन्दोबस्तो थियो। सिबिल हरुलाई अलगै रुम मा राखिएका हन्थे।
पुग्दा को भोली पल्टै लाटी को पोई
35-45 जना सिभिल केटाहरु जो भर्ति को लागी पुगेका थिए र 450 लँगर मा बुझाएर बस्नु पाएका थिए यो लिगल चाहि होईन तैपनि हामी सजिलै खाना र बस्न चाहि पाउदथ्यौ। बजार तिर काम गर्दे भर्ति देखिदै गर्नेहरु पनि थुप्रै थिए। दिदी-भेना, छामा-काका, बाबा-आमा, फुपु-पुसाउ हरु सित फेमिलि क्वाटरमा बसेर भर्ति देखिनेहरु पनि धेरै थिए। हामी पेन्शन निस्कनेको पछि लागेर छोटो अबधिको लागी गएका हरु पनि ४-५ सय हुने गर्दथ्यौ तर सबै बिभिन्न मेस र क्याम्पहरु मा छरेर राख्ने ब्यबस्था गरिएको हुन्थे। कसैले डायरी फार्म मा गाईको हेरचाह गरेर भर्ति अभ्यास गरिरहेका हुन्थे। कसैले पिग्रीमा भने कसैले टि-व्वाई, मेस व्वाई भएर काम गर्दै । बिहानै सबैलाई लँगर कमाण्डर ले उर्दी सुनायो –“लाटी को पोईहरु”, मेसमा खाना खान आऊदा फुल पेन्ट लाउला, जुत्ता लाउला, लाईन मा बस्ला 10-10 जना ले पालै पालो चामल दाल मा मा ढुँगा छान्ला। तरकारी कात्ला सिनियर लाई भेट्दा रामराम गुरुजी भन्ला लामो कपाल लिएर कोई नआउला सबै लाहुरे जस्तै देखिला। ईनिस्पेक्शन आयो भने खबर हुन्छ लुक्नु जाला। कसैले सोध्यो भने रेक्रुट हो भन्ला बिहान कोई नउठदै 5/8 GTC एक राउण्ड रनिङ लगाउला, भिम खिच्ला अनि उ त्यहाँ छ जम्प मार्ला अण्डरस्टयाण्ड ! बा एकै दिन मा यति धेरै सुत्रहरु सबैले सुन्यौ। अनि त सुरु भयो एउटाले अर्को साथीलाई लाटी को पोई भनेर बोलाउने ठेगो। लँगर कमाण्डर को साला पनि हामी सँगै थियो। अनि त उस्लाई लाटी को भाई भन्न थाले केटाहरुले र लँगर कमाण्डरलाई नै लाटी को पोई।
ट्वाईलेट को समस्या
450 भन्दा बढि लाहुरे र हरेकको एउटा आसेपासे भए अनि डिपोट कै रेगुलर क्रयू ट्वाईलेहरु अभाव हुन्थे। सजिलो उपया सुझाए गुरुजीहरुले केटा हो यसरी पालो कुर्ने हो भने फेरि ट्वाईलेट बाट निस्केर खाना खानु जानु पर्ला। एउटा बोटल टिप्ने करेशा को नजिक खाडल छ त्यहाँ दुबाउने अनि पिग्री को तल को सल्ला घारी मा जाने। बाटो मा ट्रेन बाट हेर्दा लाज नमानि हग्नेहरु को सम्झना आयो। हामी पनि त्यसै गर्यो सके सम्म बिहानै जाने गर्दथ्यौ। अलि ढिलो भयो भने बुङगुरहरु छोडिन्थे र दिशा बस्दा बस्दै कराउदै आईपुग्थे त्यसैले पनि बंगुर नउठ्दै दिसा गै सक्नु पर्दथ्यो। कतिले दिन मा मिलाएर क्याम्प मा नै ट्वाईलेट जान्थे। फोहर चाहि हुन्थे न बँगुरहरुले खाई सक्थे। यति ठुला ठुला थिए को जोत्ने गोरु जस्ता कालो मा सेतो (माले माले) र सेतो सुगुर हरुको हुलले आज को मिलेका भित्ता को सिरो खनेर खाडल बनाउथे। सिरो, कास को जरा कुटो कोडालो ले खने जस्तै गरी सुढ ले खनेर खाने गर्दथे।
ईनिस्पेक्शन नै ईनिस्पेक्शन
आज सिओ को ईनिस्पेक्शन छ बनतिर लुक्न जाउ। सुरु सुरु मा वाक्कै लाग्यो जहिले पनि ईनिस्पेक्शन भनेको छ लुक्नु गएको छ। पानी पर्ने टुंङगो नहुने कुहिरो उडे मात्रै पनि बिहान झरि मै रुझे जतिकै को शित ले लिछुरुप्पै परिने। लाहुरेहरुका नमिलाई राखेका कपडाहरु, जुट्टा, चप्पल मोजा सबै उठाएर मैला जलाउने कन्टेनर मा हालेर जान्थे ईनिस्पेक्शन का टोलीले। आर्मि भित्र को डिसिपिलिन चाहि निकै कडा थियो। सधै सफा र रुम मिलाएर राख्नु पर्ने। ठुलो हल जस्तो भवन मा तल र माथी २ लाईन मा बेडहरु हुन्थे। सिरानी मा एउटा एउटा क्याबिनेट। यो भन्दा पहिले पनि 6/8 GR बिनागुडीमाबसेको अनुभव छ। त्यहाँ छोटो समाय को लागी भएको ले लाहुरे सँगै बसेको थिए। त्यहाँ त्यति ईनिस्पेक्शन भएको थाहा भएन। डिपोट कम्पनीमा भने हप्तामा २-३ दिन त ईनिस्पेक्शन पर्दथे। पिग्री को केटाहरुले ईनिस्पेक्शन सकिएको सँकेट नगर्दै सम्म झाडी झाडी मा बस्ने। बिचमा एउटा पानी को खोला थियो। लुगा धुने नुहाउने गर्न पाईन्थ्यो। ईनिस्पेक्शन भयो भने लुगा धुने गरेर आउथे केटाहरु अनि कसैले सोध्यो भने पिग्रिमा काम गर्छु भन्नु भनेर सिकाईन्थे।
आसारको महिना पानी परि रहन्थे। हामी बिहान पानी परोस या नपरोस 58 जिटिसी को चक्कर लगाउथ्यौ। १५ दिन जति निक्कै गाह्रो भयो। चिसो ले रुधा लागेर हेरान बनायो। बिहान बिहान माकुरी को होटेल भन्दा परका बाटो माथी बाट बाटो सम्म पुग्ने गरी नासपातीको फलको लोडले बोटहरु भुई छोएका हुन्थे। हामी दोडेर गएर सित हल्लाएर बोट सिधा बनाउथ्यौ त खानु मन टिपेर खोल्टी मा हाल्थे। खासिया हरुले तिरले हान्ला है भनेर डर देखाउथे। खासिया केटीहरु जिस्काउनु हुदैन तिर ( धनुष काँड, बाण, थिन्को) ले हान्छन भन्थे। क्याम्प का वरिपरिका धुपीका रुखहरु बिहान उठेर हेर्दा उत्तानो परेका हुन्थे। हावा ले ढलेर अनि बिहानै लाहुरेहरुले हाँगा लाछेर काठ को ट्राईला बनाएर उठाएर सोझो बनाई रहेका हुन्थे। आर्मी को काम पनि हेर्दा हाँसो उठ्दो हुन्थे।मशल बन्छ भन्दै लामो स्याकेल्ड (तरवार जस्तो हँसिया) चौरको दुबो गल्फ खेले जस्तै गरी चुडाली रहेका हुन्थे।चिसो थियो तर ठुला ठुला लामखुट्टे दिन मा पनि लाग्थे। अधिल्लो दिन मा खनेर फालेका दुबो को चौर मा १०० मिटर पर बाट अर्को उस्तै चौर खनेर ल्याएर रोपिन्थे। ईस्कुल फलाईएका थिए। सिमी, तमाटर फलेका थिए। भलिबल, बास्केटबल खुव खेलिन्थे। बेलुका मादल बजाएर नाँच गान पनि हुन्थे।
२000 भन्दा बढिलाई नास्ता, खाना तैयार हुन्थे। लँगर को छेउ मै किचन र बाहिरि बरण्डा मा आज पाक्ने चामल फिजाईन्थे। लाईन लागेर नास्ता खाए पछि पालो परेका हरुले त्यही सहयोग गर्नु पर्दथ्यो। बरण्डा मा फिजाईएका चामल मा ढुँगा र मैला टिपिए पछि पकाउन लाई भित्र लगिन्थे। भात पाग्ने डेक्चीहरु पोखरी जास्ता देखिन्थे। खाना पकाउनु अधि डेक्चीलाई तातो हुने गरि तताईन्थे र नुन छरेर नुन तातिए पछि पानी खनाईन्थे यसो गर्दा कालो गरी डढेको डेक्ची को आसान सेतो हुने गर्दथे। उलेको पानीमा धोएको चामल खनाईन्थे । अव पाक्यो भने पछि त्यो लाई चामल छान्नुले झिकेर अर्को डेक्ची मा हालिन्थे र ढिमा आँचमा राखिन्थे पछि ति चामलहरु फुलेर सिता सिता हुन्थे। रोटी बनाउने तरिका चाहि अनौठो को थियो। टेबुल माथी पिठो को बोरा बोरा खनाईन्थे र तातो पानी बिस्तारै छर्दै मोलिन्थे। लामो कोईला ले बल्ने चुला माथी फलाम को पाताहरु तताईएका हुन्थे। दायाँ र बायाँ कम्तिमा 10-10 जवानहरु सिन्का समाएर बसेका हुन्थे। पिठो गुनेर सके पछि तलबाट रोटी बेलेर फालिन्थे तल खस्दा बितिकै एक फ्लाप पारेर जवानले उता सार्दथे। आफ्नो अगाडी आउदा बित्तिकै अर्को जवानले त्यसै गर्दथे। 10 जवान सम्म पुग्दा रोटी पाकी सकेको हुन्थ्यो। पहिलो दिन एक दमै रमाईलो लाग्यो। गर्मीले पसिना चाहि नुहाए जति कै हुन्छ। उता रोटी मिलाउने र रोटीमा बसेका पिठोहरु झार्ने मानिस हरु हुन्छन। तैयारी रोटीलाई काउन्तर तिर सार्दछन। यसरी फ्याक्ट्री मा जस्तै गरि बन्छ रोटी। रोटी बेल्ने र फाल्ने हरु ले जसरी जता फाले पनि तावा मै पर्छ। र खसेको सेकेन्ड मै पल्टी खान्छ। एक जनाले भागमा ३ अन्डा पर्ने गरि उसिनेको अण्डा को बोक्रा छोडाउनु पनि अर्को रमाईलो हो। एक मिनेट मा कति अण्डा छोडाउने प्रतियोगिता जस्तै हुन्छ । बोक्रा खुल्साउदा बिग्रेका अण्डाहरु अलग राखिन्छ अनि कस्ले कति खान सक्छ प्रतियोगीता पनि हुन्छ। 25 अण्डा बाजी मा खाएर बिमार पर्ने साथीहरु र 20 केरा खाएर बाजी जित्ने साथीहरु को सम्झना अझै पनि आउछ। सप्लाई जाने केटाहरुले अलिकति चलाखी गरेर चाहिने भन्दा बढि अण्डा लिएका हुन्थे। स्पलाई डिपो मा अण्डा एक बक्स मा १० क्यारेट जाने बक्सहरु हुन्थे तर केटाहरुले चलाखीले ११ क्यारेट हाल्थे। यसरी बढि हालिएका अण्डामा नै कति खान सक्ने प्रतियोगीता हुन्थे खाना चाहि थपेर खान पाईन्थे ।नास्ता चाही २ पुरी र २ पिस तर्कारी सुरु सुरु मा भोक मात्रे जिस्किन्थे। बिहान5किलोमिटर दौडेको छ पाए १० वटै खादा हुँ जस्तो लाग्दथ्यो। पछि पुरानो हुदै गए पछि चाही अण्डा छोडाउने ग्रुपमा मिसिए पछि जति खाए पनि भयो। लाटी को पोई धेरै नखा भुडी लाग्छ। दौडनु सक्दैनस भर्ति हुनु आको कि खानु आको सिनियर लाटी को पोईले मौका पायो कि हपारी हाल्थ्यो। हप्ता को १ दिन चाही मटन बिरियानी पाक्थ्यो। त्यो दिन लाई आज बडाखाना छ भन्थे।
कद्दु को तर्कारी बनाउ दिन चाही साह्रै दुख हुन्थ्यो। चिन्नो जत्रा रातो कद्दुहरु कति साह्रो बन्दरोले दाउरा चिरे जस्तो गरि बल लगाएर फुटाउनु पर्ने। ईस्कुल फेरि कस्तो चोप भएको हो स्कुस काटे पछि हात मा एक तरेली गम जस्तो लाग्ने गर्दथे।
दार्जिलिङगे पनि थिए लाहुरेहरुमा
उनिहरु ले मेसको भात खादैन थे। चिकन मटन बिरायनी भएको दिन बाहेक अरुबेला बाहिर बाट नै खाना ल्याउन लगाउथे। उनिहरु नै होटल गएर खाने अनुमति चाहि थिएन। लामो बर्षाटी कोट को खोल्टी मा प्याकिङ पार्शल ल्याउन लगाउथे। १ पटक खान ओसारेको १ रुपैया दिन्थे 5रुपैया मा सादा खाना र7रुपैया मा मासु खाना पाईन्थे। बैक अप सिलोन को आँडै मा सानो खाना पसल थियो। ३ जनालाई खाना लिन गए पछि होटेल्नीले सानो पार्सल लिन जानेलाई पनि फ्रिम दिन्थे। कतिले आफै खान्थे भने कतिले अरुलाई १-२ रुपैया मा बेचेर पैसा पो कमाउथे। समुह समुह का लाहुरेहरु हुन्थे। कतिले पैसा दिए बनमा चिकेन, पोर्क पकाउन लगाउथे। कतिले बजार बाट रम ओसार्न लगाउथे। रम लिनेले भने १ बोटल छिराएकै ५ रुपैया पाउथे।2रुपैया मा सिनेमा पुलिस बजार मा हेर्न पाईन्थे। यसरी धेरै ठिटाहरु जानी नजानी तस्कर मा लागेका हुन्थे। 8 ओटा पान किन्यो भने २ फ्रि लाहुरे हरु को पान ओसार्दा ओसार्दै कतिले पान खान सिकि सकेका थिए। बैक अफ सिलोन नजिकैको पसल्नीहरु नेपाली बोल्दथे। सोल्टी भोली नै आउ है भनेर एक्सट्रा खाना दिएर पठाउथे। पहिले पहिले अति नै डिसिपिलिन लाहुरेहरु फाईनल सेटेलमेन्ट लिए पछि भने लाप्रबाह हुन्थे। कतिले मनपरि खर्च गर्दथे। उनिहरुले फाईनल सेटेलमेन्ट पाएको २४ घण्टा मा क्याम्प छोड्नु पर्दथ्यो।
सिलोङ – सिनेमा,तीर, डाईस,
मनडे नाईट परेड – यो दिन भनेको सिनेमा हेर्नु पर्ने दिन रहेछ। नाईट परेड नाईट परेड २ हप्ता सम्म हामी गएनौ। पछि मात्रै थाहा भयो नाईट परेड पछि फिल्म हेर्ने हो २ रुपैया मै फिल्म हेर्न पाईन्थे। लाहुरेहरुले उनिहरुलाई बनेका हल मा मँगलबार मात्रै फिल्म हेर्न पाउथे। आईत बार मन्दिर पास पाउथे। दिन भरि जता दुले पनि फर्कने बेला मा कानमा फूल र निधार मा टिका लगाएर आउट पास लिएका लाहुरे हरु फर्कन्थे। कतिले महिना मा १ दिन मात्रै पाउने यस्ता पासहरु को दुरुपयोग पनि हुन्थे। साथीको पास पैसाले किनेर हप्तै पछि बाहिरा निस्कने बदमासी लाहुरेहरु पनि थिए। सिलोङ मा नबचाउने हरुले पैसा बचाउन सक्दैनन। तीर लेख्ने एजेन्टहरु लाहुरे क्याम्प मै आउछन। तीर त्यहाँ लट्ररीलाई भनिन्छ हरेक हप्ता खुल्छ। हामी पनि नबुझि नबुझि लेख्थ्यो। एजेन्टहरुले नै यसरी लेख्ने हो भनेर सिकाउथे। हामीलाई पनि निकै पटक उल्टो परेको छ। चौक चौक मा लट्री को टिकट बेच्ने मात्रै होईन डाईस खेलाउने हरु पनि हुन्थे। हामीले समुह मिलेर बाजी थाप्थ्यौ। जितेको दिन फिल्म हेरेर खाजा खाएर फर्कन्थ्यौ भने हारेको दिन मा खाजा न फिल्म पनि हुने गर्दथ्यौ।
फरक फरक को सँघर्ष
टि- व्वाई, अफसर मेस को टेवुल व्वाई, डेरी फार्मको कारिन्दा, पिग्री को सुसारे भएर भर्ति सपना सिगारी रहेका हरुको आफ्ने आफ्नै कथा थियो। कति ७ बर्ष भएका हरु पनि थिए। १ जना को कथा सुन्दा लाहुरे क्रेजको मिठो नमिठो यथार्थ सजिलै बुझ्न सकिन्छ। भाई भर्ति भएको १४ बर्ष भयो दाई ले ३ पटक भयो उमेर घटाएर डकुमेन्ट मिलाएको यो पटक कुक मा भर्ति हुदैछु। यस्ता सँघर्ष र सफल कथा थोरै मात्रै हुन। कति जना ९ बर्षको उमेर देखि अफसर को घरमा सुसारे बसेर १८ बर्ष पुगेर भर्तिको लागी कल लेटर लिएर आएका हरु पनि थिए। कति बजार मा नाम्ले (भरिया) बनेर खर्च तार्दै भर्ति खुल्ने बेला मा देखिने हरुपनि थिए। खुल्ला र डिपेन्डेन्ट (रिलेटिभ) गरेर २ किसिम का भर्ति खुल्ने गर्दथे।
सलोङ ३५ दिन मा बल्ल भर्ति खुल्यो
त्यो समायमा ईन्द्रले भर्ति देखिनु पाएन। मेले चाहि पाए। जँगलको परको फुटबल ग्राउण्ड मा रनिंङ थियो। रनिङ नै प्रमुख थियो त्यहाँ रनिंङ पास भयो भने रिटन जति पटक लगाएर पनि पास हुन्थे। अनि मेडिकल थियो समस्या म पनि मेडिकल मै अनफिट भए। मैले कलभिजन देखिन। पहिलो पटक भएको ले मैले हेर्न नै जाने न सबैलाइ ०० मात्रे देखे। तेस्रो पटक पनि नमिले पछि कलर भिजन देखाउने ले नै भन्यो तिमीले हेर्न जानेनौ छड्के हेर। त्यस पछि का अँक हरु मिले या मिलेन तर मैले देखेको थिए। सामान्य पहिला त्यति कुरा थाहा भएको भए सजिलो हुने रहेछ। मलाई रि मा राख्यो। मेडिकल हस्पितल बाट कलरभिजन ठिक भएको रिपोर्ट लिएर आउनु भन्यो। त्यस्तै मा पुसाउको आउट हुने दिन पनि आयो। मेडिकल रिपोर्ट बन्नु १ हप्ता देखि ३ हप्ता लाग्न सक्थ्यो। हुन देउ भदै उमेर छ अर्को पटक देखिनु यो पटक जाम भनेर हामी ४५ दिन को दिन मा लाग्यौ। मेडिकल गर्ने बेला को सम्झना भने जिवन भरि रहि रहयो। 40-50 जना केटाहरु नाङगै थियो। शरिरका निसाना हरु कोटी रुलर ले नापी नापी सँकेट उतारिन्थे। मेरो ओठमाथी को कोटी लाई धरै पटक नापे। भर्ति नभए पनि बडि सो चाही गरियो। केटा केटी मा थुप्रै चोटी दौतरी हरु कट्टु नलगाई पौडी खेलिएको थियो। यहा पनि त्यस्ते झल्को आयो। अन्त त २ बर्ष पछि सपाथु पुगेर ईन्द्र भर्ति भयो त्यति बेला सम्म म अरवको बाटो समाई सकेको थिए।
भर्ति मा असफलता हुनेहरुको कथा
पुर्ण गाउँ को पाईजा दाई पनि सँगै हुनु हुन्थ्यो एउटै समुहमा भर्तिमा असफल भए पछि उनिहरुको समुह मेधालय को कोईलाखानी तिर लागे। पुसाउ लाई मेरो पनि त्यहि डरलागेको रहेछ। यहाँ छोड्ने हो भने यो पनि त्यतै भासिन्छ। मैले भर्ति देखाउन घर बाट लिएर आएको हो म घर मै पुराउछु कर्म मा रहेछ भने उमेर छ फेरि नि हुन्छौ भनेर मलाई छोड्नु मान्नु भएन। भिमफेदी तनहुँ को एक जना केसी साथी थियो। उस्ले मलाई 001 एरिया मा दाई छ खर्च लिन जाम म एक्लै भए साथी जाम भन्यो मेडिकल अनफिट भएको थिए बने उ देखिन पनि पाएको थिएन। 001 एरिया पुगे पछि मलाई नेपाल फर्के जस्तै लाग्यो। मकै बारी भित्र सानो सानो घर। घर बाहिर नाङलो माथी चल्लेरी माउ तोरिएका। खड्क गर्वुजा का गीतहरु चर्को चर्को बजीरहिका थिए। “कालीगण्डकी रोएर जाने भो दुखी जिन्दगी” नेपाली लोकगीत प्रेम देखेर अचम्मै लाग्यो। डकुमेन्ट मिलाउनु छ तिमी यहि दाई सँग बस्दै गर है भनेर उ मकै बारी भित्र को सानो बाटो समाएर कता गयो गयो। अधि भख्खरै सम्म नेपाल फर्के जस्तै लागेको मन छिन मै चिसो डर लाग्यो। म त्यो अन्जान मान्छेको नजिक थिए। घेरै पछि को मौनता पछि उस्ले सोध्यो? आर्मी हो ? होईन। प्रश्न जति जवाफ दिए। भर्ति हुन आएको ? हजुर देखिए मेडिकल अनफिट भए। उस्ले अरु नसोची नेपाल फर्केर जाउँ भन्यो। यहाँ बस्यौ भने तिमीले जिन्दगी हार्ने छौ। यहाँ सफल भयौ भने मात्र लाहुरे हुने छै। असफल भयौ भने जिन्दगी हार्नेछौ। परिवार हार्ने छौ। मैले नसोधिकन उस्ले उस्को जिवनका असफलताका पानाहरु पल्टायो। मानौ उ कसैले नपढिएको पुस्तक हो।
कार्की दाई को आत्मकथा
यसरी नै 30 बर्ष पहिले म एउटा साथी सँग तिमी जस्तै आएको थिए तर मलाई झूटो बोल्न सिकाएर ल्याईएको थियो। आर्मि हो भनेर सोध्यो भने हो भन्नु मैले त्यसै गरे। त्यहि एउटा झुठो नै मेरो असफलताको शुरुवाट बन्यो। हामी भर्ति हुनलाई काम गर्दै पर्खदै थियौ। एउटा साथी भेटियो यहाँ उस्को प्रेम रहेछ। उ पनि लाहुरे हुँ भनेर झुटो बोलेको रहेछ। थुप्रै पटक गीत गायौ। प्रित लायौ यो ठाउँ नेपाल जस्तै थियो। अचानक साथीले यहाँ प्रेमिका बनाएर भुडि बोकाएछ। उ भाग्यो यहाँकाहरुले मलाई समाते जसरी नि त्यो मान्छेलाई लिएर आउनु भागेको मान्छै म कहाँ खोज्नु म आफै भागे। त्यो बेला नेपाल नै जानु पर्ने रहेछ म भाग्दै गाईगोठ गरेर बसेका नेपालीहरु को सँगतमा पुगे। उनिहरुका गोठ थिए। दुध बेचेर पैसा बनाउथे। त्यहाँ गोठलाहरुले तलव नै बर्ष को एउटा बाच्छा लिन्थे र पछि आफ्नै गोठ बनाउथे।कति को खसिया सँग बिबहा भएको थियो। कतिलाई खसिया ले नै मारेका थिए। दिदी बैनी सँग हिमजिम बढायो भनेर उनिहरु को परिवार मा महिला को हैकम चल्दथ्यो। कतिले महिलाहरु सँग बिबहा गरेर धनी बनेका थिए। त्यहाँ म पनि त्यस्तै सिकार भए बिबहा भयो सम्पती सबै भयो र पछि हाम्रो गाईले अरुको बालीमा पस्यो। बुढी सँग झगडा भयो। यहि झगडाले सम्बन्ध बिग्रियो उस्ले अर्को बिबहा गर्यो। सुरुमा लाहुरे नभई घर के जाने भनियो। त्यसपछि पैसा नकमाई घर के जाने भन्ने मन भयो। त्यस पछि मेरो घर नै यहि हो जस्तै मन भयो। अहिले मेरो नेपाल मा को छ र ? जाने भन्ने हुन्छ। कार्की दाई सँग भेट भए पछि लाग्यो नेपाल फर्कनु पर्छ। २ पछि थाहा लाग्यो पुर्ण गाउँ को दाई जो कोईलाखानीमा जानु भएको थियो उतै बितेको खबर सुने।
सिलोङ को सम्झना आउने पल हरु
तारा खेल्छन त्यहाँ पनि आलुमिनियम को धनुष पहिलो पटक त्यही हो देखेको।
लट्ररी को टिकट कात्नलाई सपनाको अर्थ लगाउनेहरु
खासियाहरुलाई नेपालीले सोल्टीनी भनेर बोलाउथे उनिहरुले पनि हामीलाई थोरै देखे भने सोल्टीनी भनेर हाँस्थे।
खसियाहरुले तीरले हानेर मार्छन बस्ती तिर जानु हुदैन भन्थे।
महिलाले नुहाउने खोलामा जँगलै जँगलै पुगेको।
माकुरी को भट्टीको पार्टी, अर्को जन्म र देवता जस्ता उपन्यास मेरो साथमा देखे पछि यो त मेरो साथीले लेखेको भन्दै एउटा गुरुजीले हामीलाई पार्टी नै दियो। प्रकाश मेरो साथी हो। लौ केटा हो के खान्छौ हिड।
फर्कने बेला मा ४ जना कै पाकेट मारियो बाग्लुङ बिर्धा का गुरुङ लाहुरे र लाहुरनीले टिभी किनेका थिए सोलार ले चल्ने भन्दै प्यानल सहित को बल्याक एण्ड व्हाईट टिभी किनेका थिए।कलर टिभीको चलन आई सकेको बेला गाउँमा बिजुली नहुनु को पिडा टिभी किनाईले बताउथ्यो। प्रेशर कुकर निकै ठुलो थियो मैले बोकिदिएको थिए। ट्रेनको ढोका मा बत्ती निभ्ने र बल्ने गरेको थियो। कोहि बाहिर निस्के जस्ता गर्दै थिए केहिले लाईट रिपिएर गरे जस्ता गरेर ढोका ,मा भिड भएको थियो भित्र पसेर गोजी छाम्दा भित्री कट्टुको पकेट को पैसा पनि कति छिटो चोरी भै सकेको थियो। प्रेशर कुकर सित मा राख्दा बितिकै मैले पैसा छामे र पाकेट मार्यो भने ढोका मा हेर्दा बत्ती बलि रहेको थियो चोर हरु भागी सकेको थिए लाहुरे हरुको पनि पकेट खर्च छुट्टाएको जती पाकेट मरेछ। यसपटक भने हामीलाई टिकट गोरखपुर कै भए पनि जलपाईगुडी (पानी टैकी) स्टेशन मा उत्रियौ र जीप चढेर काँकडभिट्टा नाँका बाट नेपाल आईपुग्यौ । घरमा आई पुग्दा झी को हरेलो मेलाको दोस्रो दिन परेको थियो। नाँच लगाउने मा त्यही रात नै मेला मा पुगियो। अचानक मेला मा मलाई देख्ने साथीहरु म भन्दा छक्कै परेका थिए। स्कुल को बेन्ची माथी बसेर नाँच हेरिरहेको बेला कस्ले ढकेल्यो कुन्नी बेन्ची ढलेर भाँचियो। रामे भेना कराए कस्तो डिस्सिपिलिन नभएको मान्छेहरु। हामी उठ्दा न उठ्दै अर्को बेन्ची पनि त्यसरी नै लड्यो। लाजै नमानि हामी सबैले एकै स्वरमा करायौ कस्तो डिस्सिपिलिन नभएको मान्छेहरु। नाँच चलिरहेको बेला बेन्ची भाँच्चिए पछि लडाई भयो कि भनेर नाँच्नेहरु एक छिन तर्सिएर रोकिए।
सिलाङ को बसाई अझै पनि मलाई प्रेरणादायी बन्ने गर्दछ। हेर्दा मात्तै ४५ दिन थिए त्यति छोटो समायमा लामो दुरी यात्रा गरे र सयौ मानिसहरु को सँगत गरे सबै सँग केहि न केहि सिके। गुवा पान को अनुभव। कुकुर को मासु बेच्ने होटेलहरुमा खाए, सफलता को कथा र असफलताको कथाहरु सबै देखे, सुने, भोगे र सिके। साथीहरुले हाँसो गरे एक बर्षा राम्रै आराम गरिस। म चाहि थकाई लुकाई रहेको थिए। धेरै पछि सम्म पनि हामीले तौल जोखेर निकालेका पोस्टकार्डहरु झोला मै थिए। यो पटक खोज्दा फेला परेन।
This entry was posted in अन्य समाग्रीहरु by Wakhet Diary. Bookmark the permalink.	One thought on “सम्झनाको स्पर्शहरु- सिलोङ, लाहुरे सपनाको रँग”	Chhabi on June 24, 2013 at 10:05 pm said:
ati man pareyo
Reply ↓	Comment Here Cancel reply	Enter your comment here...